AFT – Teatra : hoentina an-tsehatra ny « Kibo tsy omby » | NewsMada
AFT – Teatra : hoentina an-tsehatra ny « Kibo tsy omby »
Na mbola tsy vita aza ny fanamboarana ny Tranompokonolona Analakely, hany toerana azon’ny mpanao teatra ampiasaina, mitohy ny fiakarana an-tsehatra. Mifanome fotoana amin’ny mpankafy teatra ny tropy Jeannette, ny alahady izao etsy amin’ny Alliance française (AFT) Andavamamba. Holalaovina amin’io fotoana io ilay piesy mitondra ny lohateny hoe « Kibo tsy omby ».
Nosoratan’i Mbato Ravaloson, mpitarika ny tropy Jeannette sady filohan’ny fikambanan’ny mpanao teatra eto amintsika (FMTM), ity piesy ity, ny taona 1991. Niainga tamin’ny zava-nisy ny tantara, izay mikasika mpifankatia noraràna tsy hiara-dalana. Araka izany, ho tantaraina eny an-tsehatra ny sedra nolalovan’izy ireo.
Raha izay ny amin’ny tapany voalohany amin’ny fampisehoana, handrafitra ny tapany faharoa kosa ny fiangalian’ny tropy Jeannette ireo hira teatraly noforonin-dry Andrianary Ratianarivo sy Rasamy Gitara. Raha tsiahivina, efa 87 taona no niorenan’ny tropy Jeannette ary anisan’ny nanandratra avo ny lazan’izy ireo sy nanamarika ny tantarany ny sanganasan’ireto mpanoratra roalahy ireto.